रौतहट मलाही टोलको एक महिलालाई घरबाटै अपहरणको प्रयास - Cherwant Khabar
मिति: २०७७ असार २९, सोमबार
Read Time:2 मिनेट,9सेकेन्ड
रौतहट, घरमै आफ्ना छोराछोरी सँग रहेकी महिलालाई गए राति अपहरण गरेर लाने प्रयास भएको छ ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका मलाही टोलकी एक महिलालाई गए राति ९ बजे चार जनाको समुहले घरबाटै जबरजस्ती अपहरण गरेर लग्ने प्रयास गरेका हुन । महिलाका श्रीमान कामको सिलसिलामा गौरमा रहेको मौका छोप्दै चार जनाको समुहले अपहरणको प्रयास गरेको थियो । “घरमा बसिरहेको बेला अचानक चार जना आएर मुख थुन्दै बोकेर लग्न थालेका थिए ।” पीडित महिलाले भनिन “चारैतिरबाट घेरेर उनीहरुले जबरजस्ती घिर्सान थाले पछि गुहार माग्दै धेरै बेर कराए । होहल्ला सुनेर छिमेकीहरु आए पछि चारै जना भागे ।” जबरजस्ती घिर्सान थाले पछि उनी बेहोस भएर लडेकी थिइन ।
घटना पछि गौर अस्पतालमा उपचारका क्रममा रहेकी ३५ वर्षिया महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा चिथोरेको घाउदाग रहेको छ । अपहरण गर्न आएका अजय सहनी, राकेश सहनी, राजा सहनी र ज्योती सहनी रहेको महिलाको दाबी छ । चार मध्ये तिन जना गरुडा नगरपालिकाको र एक जना गढीमाई नगरपालिकाको रहेका छन ।
घटनाका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक रविराज खडकाले अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन । “घटनाको रिपोर्ट आएको छ । घटनाका बारेमा विस्तृत बुझ्ने काम भएको छ ।” उपरिक्षक खडकाले भने “यस विषयमा हामी गम्भीर भएर अगाडी बढी रहेका छौं । घटनामा सँलग्नहरु चाडै नियन्त्रणमा हुनेछन ।”लकडाउनको अवधिमा रौतहटमा महिला उपरका हिंसाहरु वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । स्रोत रौतहट टाइम्स
२०७७ असार ५ गते शुक्रबार कुन–कुन राशि हुनेहरुका लागि शुभ ?
वीरगंज युवा समाजको अभियान आज पनि जारी
नेपाली नमस्कार विश्वव्यापी फैलिदै
६ महिना लकडाउन भएपनि कुनै गरिबलाई भोको हुन दिन्नँ – द्वारिकलाल चौधरी
अपराध (12) अर्थ-वाणिज्य (2) आगलागी (4) आजको मौसम (2) आयात निर्यात (3) कालोबजारी (2) कृषि (4) केपी शर्मा ओली (5) कोरोना (92) क्‍वारेन्टाइन (3) खेलकुद (2) चट्याङ (1) चाड पर्व (1) जीवनशैली (1) झडप (4) दुर्घटना (1) धर्म (1) नेपाल प्रहरी (3) नेपाली सेना (1) परीक्षा (1) प्रवास (4) बलात्कार (2) मेयर पक्राउ (1) राशिफल (66) राहत (10) रोजगार (1) लकडाउन (5) शिक्षा (4) सिमा (1) सीमा क्षेत्र (2) सूचना (1) स्वास्थ्य (4) हावाहुरी (3)
बिरगंज १७ अलौंमा २७० जनालाई राहत सामग्री बितरण
प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख, ४ प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख, ४
हिमपातका कारण हवाई मार्ग ठप्प
बिरगन्जबाट जाँदै गरेको बोलेरो जिप ओेखलढुंगामा दुर्घटना
प्रकाशित मिति: २०७६ फाल्गुन, २९ प्रकाशित मिति: २०७६ फाल्गुन, २९
२०७७ जेठ १८ गते आइतबार कुन – कुन राशि भएकाहरुका लागि कति शुभ ?
प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ, १८ प्रकाशित मिति: २०७७ जेष्ठ, १८
सब डिभिजन बन कार्यालय कोल्हबीले काठ सहित दुई जनालाई पक्राउ